Fampidirana ny paikady fanodinana CNC | Ny bilaogy | PTJ Hardware, Inc.
Home > Blog > Fampidirana dingana
Ny asa fampiasa matetika amin'ny mpanasa maro
Misy karazany maro ny fanasan-damba, samy hafa ny habeny sy ny hateviny, ary ny fitaovana samihafa, ary samy hafa ny anjara asany. Ankehitriny dia ampahafantarina anao ny asan'ny fanasan-damba fampiasa matetika sy ny fitandremana amin'ny fametrahana.
Mahafehy tanteraka ny fahaiza-manao amin'ny fanazaran-tena amin'ny fandrefesana sy ny milina Cnc!
Ny fampiasana marina ny coolant dia tena ilaina mba hahazoana fahombiazana tsara amin'ny fandavahana, hisy fiantraikany mivantana amin'ny fivoahan'ny chip, ny fiainan'ny fitaovana ary ny kalitaon'ny lavaka vita amin'ny milina mandritra ny machining.
Ahoana no hanovan'ny fanontana 3D ny sehatry ny fahasalamana?
Tamin'ny taona 1983, Chuck Hall, rain'ny fanontam-pirinty 3D, no nanao ny mpanonta 3D voalohany eran'izao tontolo izao ary nampiasa azy io hanontana kaopy kely fanasan-maso. Kaopy fotsiny ity, kely sy maizina, toa mahazatra be, fa io kaopy io no nanokatra ny lalana ho an'ny revolisiona. Ankehitriny, io teknolojia io dia manova ny indostrian'ny fitsaboana amin'ny fomba manaitra.
Ny fomba fifantenana marina amin'ny mason'ny milina fitotoana
Ny milina fikosoham-bary CNC dia fitaovana mekanika ampiasaina amin'ny fanamboarana bobongolo, fitaovana fanaraha-maso, bobongolo, rindrina miolikolika be pitsiny misy rindrina, prostheses artifisialy, lelany, sns., ary ny tombony sy ny anjara asa lehibe amin'ny milina fikosoham-bary CNC dia tokony hampiasaina tanteraka rehefa mifidy CNC fikosoham-bary. Nandritra ny fandaharana NC, ny programmer dia tsy maintsy mamaritra ny masontsivana fanapahana ho an'ny dingana tsirairay, anisan'izany ny spindle hafainganam-pandeha sy ny sakafo haingana.
Ny vahaolana amin'ny deformation ho an'ny CNC mamadika ampahany manify-rindrina
Ao amin'ny dingan'ny fihodinan'ny CNC, ny faritra sasany misy rindrina manify dia matetika voahodina. Rehefa manodina workpieces manify manda, noho ny mahantra rigidity ny workpiece, ny deformation ny manify-rindrina workpieces amin'ny CNC lathes dia amin'ny ankapobeny ny trangan-javatra manaraka ireto mandritra ny fihodinana dingana.
Inona no mifehy ny fitaovam-pamokarana, toy ny «drills», «Lathes», ary ny milina fanaovana fikosoham-bary?
inona no mifehy ny fitaovana famokarana, toy ny drills, lathes, ary ny milina fikosoham-bary? Fitaovana milina cnc no fanafohezana ny fitaovana milina fanaraha-maso nomerika, izay fitaovana milina mandeha ho azy miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso programa.
Ny fampiharana ny fanadihadiana amin'ny Laser momba ny 3D Laser Scanning Goaf
Amin'ny fitrandrahana lalina ny harena ankibon'ny tany dia tsy vitan'ny hoe mitaky avo lenta ny teknolojia fitrandrahana, fa manohintohina ny fiarovana ny fitrandrahana koa. Mba hiantohana ny fiasa mahomby sy azo antoka amin'ny asa fitrandrahana dia ampiasaina ho teknolojia fandrefesana mandroso ny teknolojia fizahana laser 3D. , Nampiharina tsikelikely tamin'ny fitrandrahana. Ny lahatsoratra dia mamakafaka ny fampiharana ny teknolojia fizahana laser telo-telo amin'ny fandrefesana ny goafs amin'ny toeram-pitrandrahana vy, ary manome andinin-tsoratra ho an'ny olona ao amin'io orinasa io ihany.
Tena marina ve ireo faritra fanontana 3D?
"Inona no maha-marina ny fizarana vita pirinty 3D anao?" Fanontaniana napetraky ny mpanao pirinty 3D matetika io. Ka inona ny maha-marina ny fanontana 3D? Ny valin'ity fanontaniana ity dia miankina amin'ny lafin-javatra maro, ny karazana teknolojia fanontam-pirinty 3D, ny toeran'ny mpanonta 3D ary ny fametrahana ny masontsivana fanontana, ireo fitaovana voafantina, ny endrika maodely sns.
Ny niandohana sy ny toetran'ny milina soisa
Masinina Soisa-ny anarana feno dia ny lathe CNC mihetsiketsika afovoany, azo antsoina koa hoe latina mandeha ho azy CNC finday, ilay milina fanodinana milina fitotoam-bola na latte slitting. Izy io dia fitaovana fanodinana marim-pototra izay afaka mameno ny lathe, ny fikosoham-bary, ny fandavahana, ny mankaleo, ny fikikisana, ny sokitra ary ny fanodinana fitambarana hafa indray mandeha. Ampiasaina indrindra izy io ho an'ny fanodinana batch ny fitaovana maodely sy ny zoro faritra miendrika endrika tsy manara-penitra.
Ny fitrandrahana sy ny fampiharana ny fomba fitantanana 6S amin'ny fampianarana amin'ny fiofanana momba ny milina
Ampiharo ny maodely fitantanana 6S amin'ny fampianarana fiofanana momba ny milina matihanina sy elektrika amin'ny fampianarana amin'ny oniversite avo lenta, mampifangaro fahalalana, fahaizana ary fanabeazana kalitao, mampiorina ny fampianarana fiofanana amin'ny famokarana orinasa maoderina, izay ahafahan'ny mpianatra mametraka fahatsiarovan-tena ho an'ny matihanina. ary mamorona fahazarana matihanina tsara. , Manana fahaiza-manao asa tsara hanatsarana kalitao matihanina.
Ny fanaraha-maso ny vidiny sy ny fanatsarana ny fizotran'ny milina Cnc
Amin'ny dingan'ny famolavolana, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy fanatsarana ny vidin'ny indostrialy, ny tanjona amin'ny fitsitsiana ny vidin'ny famokarana sy ny fanatsarana ny tombony ara-toekarena eo amin'ny orinasa dia azo tanterahina.
Fanadihadiana momba ny fahasahiranana amin'ny vy vy
Ny valiny dia mampiseho fa ny atin'ny S sy P an'ny vy vy 26 # dia teo ambonin'ny sisiny avo, ny atin'ny Si of 22 # vy vy dia ambany, noho izany dia tsy nahafa-po ny fenitra simika. Ny karbaona mitovy amin'ny castings dia 4.36%, izay an'ny casting karbonina avo lenta.
1 2 3 4 5 6 ... Last NEXT
Machining Axis 5
Masinina momba ny milina
Bobongolo metallurgy vovoka
Stainless vy machining
Machining Super Alloy
Fitaovana milina vy